Home EUROPEAN FOOTBALL STORIES Ndị egwuregwu bọọlụ Italiantali Ciro Immobile Child Story Plus Na-enweghị Nkọwa Eziokwu
LB na-egosi Full Story of a Football Genius onye kasị mara aha "kwụụrụ". Anyị Ciro Immobile Child Akụkọ na-enweghị akụkọ ndụ Eziokwu na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị a ma ama site n'oge ọ bụ nwata ruo n'oge. Nyocha a na-agụnye akụkọ ndụ ya tupu ama ama, ndabere ezinụlọ, mmekọrịta mmekọrịta, na ọtụtụ ndị ọzọ OFF-Pitch facts (amaghị) banyere ya.
Ee, onye ọ bụla maara banyere nkà ya kachasị mma ma ọ bụ naanị mmadụ ole na ole na-atụle Ciro Immobile's Bio nke bụ ihe na-akpali mmasị. Ugbu a n'atụbeghị ọganihu, ka anyị malite.
Ciro Immobile Child Story Plus Ọ bụghị akụkọ banyere eziokwu -Mbụ na Ndụ Ezinụlọ
Malite, Ciro Immobile mụrụ na 20th ụbọchị nke February 1990 na Torre Annunziata, Italy. A mụrụ ya nna ya bụ Antonio Immobile na mama ya Michela Immobile.
Na-etolite n'obodo ya (Torre Annunziata dị n'okpuru ebe a) nke dị na ụkwụ Ugwu Vesuvius, nwa okoro na agbanyeghi obi ojoo na-eme egwuregwu na-eme ka ndị mụrụ ya chee na ha ga-echegbu onwe ha banyere ụlọ ọrụ ha.
Nchegbu ha enweghi ihe jikọrọ ya na ọkụ ọkụ na-aga n'ihu na nso Ugwu Vesuvius nke bibiri Annunziata ugboro abụọ. Ọ na-elekwasịkarị anya na ọchịchọ ndị na-eto eto na-eto eto na-eme ka ha gbanwee ndụ ha na ime ụlọ ihi ụra na pitch pitch ebe ọ na-agbapụ n'echeghị echiche.
Ihe a na - ekwu banyere nsogbu nwa obere nwanne ya nwoke, Luigi bụ onye a na - emekarị ka ọ nweta ọkwa ndị ahụ, mmepe nke ọ bụghị nanị na ọ ga - emerụ ahụ ike nwa ya kama o nwere ike imetụta ya ịzọzọ ụzọ nwanne ya nwoke okenye.
N'oge na-adịghị anya ndị nne na nna Immobile chọpụtara na ụzọ kachasị mma iji chebe ụlọ ha pụọ ​​na nhụsianya bụ inye nwa ha ọchịchọ nke ukwuu iji kwuo okwu site na idebanye aha ya na ụlọ akwụkwọ egwuregwu nke obodo ha, bụ Torre Annunziata '88 mgbe ọ bụ nanị agadi 5.
Ciro Immobile Child Story Plus Ọ bụghị akụkọ banyere eziokwu -Ụzọ Ebu Ụzọ
Immobile mere afọ 5 sochirinụ nke ndụ ya na Torre Annunziata '88 ebe ọ na-asọpụrụ nkà nkà football ya na ebe ndị zuru oke. Nnukwu ọrụ ya mere ka ọ gaa Sorrento Calcio (mgbe ọ gbalịsiri ike ịkwado onwe ya na ọgbakọ ndị ntorobịa nke Empoli na Salernitana) ebe o meriri ihe mgbaru ọsọ 30 na oge 2007-08.
Ihe ama ama na ihe omuma ndi ntorobịa nke oma bu ihe ozo bu Juventus na 2008. Na-egwu maka U19 n'akụkụ nke ndị na-eto eto, Akụrụngwa top goalscoring akwụkwọ hụrụ ya agbajikwa Renzo Cappellaro si 50 afọ ndekọ ndekọ nakwa dị ka mere Serie A mmalite mgbe ọ bụ 18.
Ciro Immobile Child Story Plus Ọ bụghị akụkọ banyere eziokwu -Bilie Iji Mara Aha
Ọ bụ ezie na agbụrụ ndị dị na Realbile na-eto eto nwere ike inweta ya na-ewu ewu n'ógbè ahụ ọ na-ata ahụhụ na-arị elu na ala ruo mgbe aha okpu ọnụ ụzọ ya mgbe ọ nwetara njem na Torino na 2013.
Ọ bụ na Torino na-enweghị ihe ọ bụla si na omimi nke nlelị na nhụjuanya site n'ịtụle mmalite ya maka ìgwè ahụ ma chịkọta ihe mgbaru ọsọ 23 iji nyere Torino finish 7th aka na njedebe nke 2013-2014 Serie A oge.
Ihe mgbaru ọsọ ya bụ nke kachasị elu maka oge ahụ ọ bụghị nanị na ọ na - enweta Golden Boot a na - achọsi ike (Capocannoniere) ma jidere ndị nlegharị anya bụ ndị chọrọ inweta ọrụ ya maka ikuku ndị Europe. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme
Ciro Immobile Child Story Plus Ọ bụghị akụkọ banyere eziokwu -mmekọrịta ndụ
N'azụ onye ọ bụla na-akwado Ịtali ọ bụ enyi nwanyị ma ọ bụ ebe a na-akwụ ụgwọ na ọ bụghị naanị. Onye na-emepụta ihe na-adịgide adịgide na Jessica Melena; a girlfriend and Model who became his wife.
Di na nwunye ahụ zutere mgbasa ozi ọha na eze n'oge mgbe Immobile na-egwu Pescara. N'oge na-adịghị anya, ha hụrụ ibe ha n'anya nke ukwuu na Jessica aghaghị ịhapụ ihe ndị ọ hụrụ n'anya n'oge gara aga, eziokwu nke o kpughere n'oge mkparịta ụka ebe ọ kwuru na:
N'ihi mpụ, m hapụrụ, family and my roots. His love was like a tusunami that swept what used to be my former life and ushered me into new beginings.
N'ikwu okwu banyere ihe mere ya ji daa ịhụnanya na ihe ndị mere ka alụmdi na nwunye ha gaa na 17th nke May 2015, Jessica kwuru na àgwà ya nwere mmasị na ya masịrị ya gụnyere ọchịchọ ya na-enweghị ọchịchọ ịlụ nwunye ya.
Di na nwunye di na nwunye nwere umu umunwanyi abuo, o nweghi ihe obula choro na nna na-enwe obi uto ka acho nwa nwoke dika nwunye ya na-ekpughe:
Ciro Immobile Child Story Plus Ọ bụghị akụkọ banyere eziokwu -Atụmatụ Atụmatụ
A maara ọtụtụ ndị na-egwu egwu na ha na-eyi ihe ndị nwere nkà na-enwe ihe mkpuchi obi ma na-egbu egbu nke Immobile bụ nke na-akwalite ihe ndị mmadụ nwere mmasị na-esote mgbe alụmdi na nwunye gasịrị: iwulite ezinụlọ nwere ịhụnanya. Ọ na-edegbu egbugbu dị n'okpuru ebe a 'Nri incomincia la vita ma ọ bụ na-enweghị m.' nke sụgharịrị 'Ebe ndụ malitere na ịhụnanya adịghị agwụ agwụ.'
Tupu Iobbile a na-egbu egbu n'elu, a na-eji ihe osise zuru ezu nke nwa ya nwanyị Michela na aka nri ya.
Ciro Immobile Child Story Plus Ọ bụghị akụkọ banyere eziokwu -Egwuregwu vidio riri ahụ
Ọtụtụ ndị na-agba chaa chaa ọkachamara na-eme ihe omume ntụrụndụ site na igwu egwuregwu vidio ma ọ bụ naanị mmadụ ole na ole na-enweta ihe omume ntụrụndụ ha na-eri ahụ dị ka ihe na-adịghị mma nke yiri ka ọ ga-enwe oke ọgwụ maka ịkpọ FIFA17.
A dọtara mmasị na mmerụ ahụ Immobile na October 2016 mgbe nwunye ya, Jessica Melina dere otu vidio na saịtị Instagram iji gosi ihe ọtụtụ ndị kọwapụtara dịka ihe ize ndụ dị na FIFA17 riri ahụ.
Vidio ahụ weghaara Jessica na-agbalị ịnata uche di ya nke kpuchiri ya kpamkpam. Enwere ike ịnụ ya na-ajụ "Ịgba egwu ihe ị na-eme?" Mana ọ bụ ihe egwuregwu na-emetụta nnọọ n'egwuregwu ahụ iji ghọta na ọ nọ ọbụna n'ebe ahụ !.
Ciro Immobile Child Story Plus Ọ bụghị akụkọ banyere eziokwu -Egburu otu ugboro
Ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ọ bụ na July 2018 ka a na-achọgharị ihe na-adịghị na ya site na onye Pescara na-egwu egwu mgbe ọ na-atụrụ ndụ n'akụkụ osimiri ya na nwunye ya na ụmụ nwanyị abụọ. Otú ọ dị, ndị ụkọ mmiri na-agba ọsọ gaa na enyemaka nke Immobile ka ndị uwe ojii e ji ngwá agha tinye aka n'ọrụ site n'iji mma na-ejide mmadụ.
Ihe mmepe ahụ mere ka ndị mmadụ mara na ndị na-ama egwuregwu nke egwuregwu nwere ike ime ihe ga-esi na egwuregwu egwuregwu, nke onye nwe ụlọ oriri na ọṅụṅụ dị n'akụkụ osimiri.
"Amaghị m onye mwakpo ahụ. Nke a bụ ụdị ihe merenụ na-eme mgbe ndị mmadụ na-etinye nnọọ nkwụsi ike na football. "
Ciro Immobile Child Story Plus Ọ bụghị akụkọ banyere eziokwu -Ndụ onwe onye
Immobile bụ onye ọkpụkpọ a kpebisiri ike na ọ ga-akwụsị na ihe ọ bụla iji gosi onwe ya dị ka otu n'ime ndị kasị mma. Nke a na-apụta ìhè na njedebe dị egwu ya na ihe mgbaru ọsọ kachasị elu-mgbe ọtụtụ ndị na-eche na ọrụ ịgba chaa chaa na-agbapụ.
N'ikwu nke a, ọ na-echekwa na ọ dị mkpa ịhụ ịhụnanya na ezinụlọ na ịma mma site n'aka nwunye ya.
N'ihe banyere adịghị ike ya, Ihe ọjọọ nwere ike ịbụ isi ike, ekworo na enweghị nkwekọrịta. Karịsịa, ọ bụ nkà, hụrụ ịhụnanya n'anya ma bụrụ nke ime mmụọ.
Ciro Immobile Child Story Plus Ọ bụghị akụkọ banyere eziokwu -Ọ bụghị naanị otu uwe elu
Ọ bụ ezie na ndị nkwụnye ụkwụ ndị ọzọ na-etinye nọmba nke na-egosipụta ọrụ ha n'ọhịa na-akpọ 17 nọmba na Leonardo Bonucci na-agabiga ọrụ na ọrụ. Nọmba ahụ na-ezo aka ụbọchị ọmụmụ nke nwunye ya bụ Jessica Melena, onye a mụrụ na July 17, 1990. Nke a bụ ihe kpatara ọ na - agbasi mbọ ike iji mee ka igosi egwuregwu na akara ngosi gosipụtara ọnụ ọgụgụ dị oké ọnụ ahịa.
Nyochaa: Daalụ maka ịgụrụ Ciro Realbile Child Story tinyere akụkọ ndị dị oke egwu. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịdị mma. Ọ bụrụ na ị hụ ihe na-adịghị ele anya na isiokwu a, biko tinye okwu gị ma ọ bụ kpọtụrụ anyị !.